Indlela ukukhetha High Power LED isibane?
LED baba ngakumbi zithandwa ngakumbi kwindawo ukhanyiso, ngokuba okonga umbane, zinokuhlala ngaphezu kweeyure phantsi kwamandla efanayo kudla, ngoko ke kuhle kakhulu flash ukukhanya. Nokuba ukukhetha indlela layita olungileyo inkxalabo kakhulu abantu abafuna uthenga layita LED. 1. ubungakanani LED: LED Inombolo sh ...
Amanyathelo ngexesha yokugcina LED kunye nokusetyenziswa
LED yi izakhi-ethe kakhulu electronic, ngoko umele ulumke kakhulu ngexesha ukugcinwa kunye nokusetyenziswa, kungenjalo kuya kubangela ufumile LED, okuhlatywa okanye ukufa. Kwaye a lot of LED ngxaki ingafumaneka kuphela xa nokusetyenziswa. Storage: 1. Ukufuma ubungqina kunye anti-electrostatic iphakheji ukufuma iqabane izifunxi ...
Zintoni sihlaziya umyinge kunye nezinga isakhelo?
Sihlaziya umyinge linani amaxesha zomfanekiso umboniso, xa ithe repainted okanye bawuphumzile ngomzuzwana. Njengoko kubonisa rhoqo inkqubo, isicwangciso sihlaziya umyinge okuvakaliswa elilodwa. Oko kukuthi, ukuba sihlaziya umyinge 75 Hz ithetha umfanekiso luhlaziywe amaxesha 75 mgomzuzu omnye. Iireyithi fresh eqhelekileyo ukuba ...
Yintoni indlela scan ukuba Screen LED?
Uhlobo ukuskena yoboniso LED ziyabhidisa abantu abaninzi, ntoni umsebenzi wakhe? Kwaye yintoni le nomthelela sikrini LED? Nazi kukunika ulwazi iinkcukacha: drive nganye IC babe izikhonkwane-16, kwaye ukuqhuba 16 chip LED kwi kakhulu. imo drive static kuthetha zonke ii-LED kwi umnqongo LED eziqhutywa yi-IC nangaliphi t ...
Umgama ukubukela lusebenze
Elilelona (best) umgama ukubukela screen kwakhokelela ngumgama ukubukela ukubonelela abaphulaphuli kunye okuhle olubonakalayo ukubukela kwakhokelela isikrini kwaye akukho umbala. Enyanisweni, kunzima kakhulu ukuchaza oku ngenxa yokuba baninzi kakhulu izinto nempembelelo, ezifana inowuthi pixel, lo SC ...
Yintoni ukubukela engile?
Ukubukela angle le angle ubuninzi apho umboniso ingabonwa kunye nokusebenza olubonakalayo eyamkelekileyo. Oku kuquka angle ukubukela oxwesileyo kwaye nkqo ukubukela-engile. Le lomfanekiso ibonakale ungabanjwa, kakuhle ifumile, Noko amahlwempu, ukufiphala okanye amandla kakhulu ngaphandle lowu ukubukela uluhlu-engile, i ...
Nhlamuselo ukhuseleko ukungena (egIP65)
Lingenwe Protection (IP) yi mlinganiselo yaseYurophu elichaza iqondo wokhuseleko zibonelelwa ebiyelweyo izixhobo zombane. Inkqubo mgangatho iqulathe iincwadi bamlandela IP ngamanani ezimbini: Inani yokuqala ibonisa ngesidanga nokhuseleko okuqinileyo into angaphandle lingenwe. T ...
Yintoni umahluko SMD kunye DIP?
Kwakhona SMD ogama SMT (umphezulu ekhwele technology), isibane SMD yi ngelotha phezu kwibhodi PCB. SMD isiboniso ekhokelwa isetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi endlwini. Kanye ngoku Iyasetyenziswa kwiiprojekthi yaphandle. SMD elingaphandle wakhokela imiboniso zanele oqolileyo, IP65 amanzi ubungqina kunye iminyaka zovavanyo. DIP (ombaxa ...
Umahluko phakathi Bonisa LED Imithombo Ukukhanya
Umthombo ukukhanya LED ngundoqo ukuba LED yokusebenza ukubonisa, nto leyo ebonisa umbala guquki, ukukhanya, ukubukela engile kunye neendleko screen eziphathekayo. Apha bangangenisa umahluko phakathi matrix dot, DIP kunye SMD LED umthombo ukukhanya. 1. Dot umnqongo matrix: lona design elidala, isusela int ...
Ingaba umqondiso kunzima kwiprogram?
Hayi akunjalo. kwenziwa ngokusebenzisa i ekude ngesandla-kudlalelwa iinkqubo ngenxa Imiboniso ezininzi, akukho software yekhompyutha okanye ezizodwa iyafuneka. Ulawulo kude kuyaphumelela kwiprogram okanye uhlele umqondiso ezinyaweni ukuya ku-25 kude. ibonisa zethu ungasebenzisa noba kulula ukuyisebenzisa software yethu kude okanye.
Indlela Lawula Full-LED enemibala Bonisa Quality?
amacandelo LED yeyona ndawo ibalulekileyo umbala ngokupheleleyo LED ukubonisa. Ngenxa yoko, ukuphucula umgangatho amacandelo LED kubalulekile ukwenza umbala ngokupheleleyo umboniso elungileyo LED. Kukho izalathi ezintlanu ezibalulekileyo ukuvavanya umgangatho amacandelo: 1) Izinga ukusilela Njengoko umboniso comp umbala full LED ...
Yintoni isiko LED ukubonisa?
AeroV uyakwazi ukunikeza uyilo esingabizi esenziwa ukuba ivumelane ezahlukeneyo Isicelo-Elungiselelweyo LED Imiboniso, leyo yenziwe ngokungqinelana kwimfuno umsebenzisi nokuqwalasela neminye imiba ukuze bakwazi zigcinwe lula. Kakade isondlo inceda ukuphucula ubomi equi electronic ...
Led Display Billboard, Seamless Led Video Wall, Waterproof Led Screen, Led Outdoor Advertising Board, Ngokukhokelwa Bonisa Screen Video Wall Billboard , Indoor Led Video Wall,